Shantui Janeoo dia nahazo ny vokany lehibe teo amin'i Jinan i Brand
Ny tolakandron'ny 20 martsa, notontosaina tao amin'ny Jinan Newspaper Building ny lanonana fankalazana Jinan Top 100 an'ny orinasa malaza. Ny fivoriana dia natrehan'ny lefitra lefitry ny tanànan'i Jinan Sun Bing sy ny lehiben'ny sampandraharaha mifandraika amin'izany, ary koa ...
Shantui Janeoo dia nandrombaka ny "Brand Leading of the Year" nitaona an'i Jinan
Ny tolakandron'ny 20 martsa lasa teo dia notontosaina tamim-pahibemaso tao amin'ny tranom-panoratan-gazety Jinan ny fankalazana faharoa "Influencing Jinan" Top 100 orinasa malaza. Sun Bin, lefitra lefitry ny tanànan'i Jinan ary mpitarika ny sampana mifandraika amin'izany dia nandray anjara, ary solontenan'ny orinasa 100 nahazo loka ...
Ny vokatra Shantui Janeoo dia manampy amin'ny fanitarana ny fanamboarana haavo haingam-pandeha Puyan.
Ny 11 martsa lasa teo dia nanampy tamin'ny fananganana fitaovana roa mifangaro amin'ny fangaro amin'ny simenitra SjHZS180-3R i Shantui Janeoo tao amin'ny fizarana Dapuchaihe-Yantongshan ao amin'ny làlambe nasionaly Yanji-Changchun (nantsoina hoe faritra Puyang amin'ny làlambe Yanchang) mba hamita tsara ny fametrahana .. .
Ny vokatra Shantui Janeoo dia manampy amin'ny fanitarana ny fananganana faritra Puyan haingam-pandeha
Tamin'ny 11 martsa lasa teo, i Shantui Janeoo dia nanampy tamin'ny fananganana fitaovana roa mifangaro amin'ny fangaro amin'ny beton SjHZS180-3R ao amin'ny faritra Dapuchaihe-Yantongshan ao amin'ny National Yanji-Changchun Expressway (antsoina hoe Yanchang Expressway Puyan Section) mba hamita tsara ny fametrahana sy ny komisiona .. ...
Ny vokatra Shantui Janeoo dia manampy amin'ny fananganana lalamby Shanghai-Suhu
Vao tsy ela akory izay, tao amin'ny toeram-panorenana Shanghai, fitaovana fampifangaro simenitra roa HZS180-3R an'ny Shantui Janeoo no nandany ny faneken'ny mpanjifa, nanomboka ny dia vaovao hanampiana ny fanamboarana ny lalamby Shanghai-Suhu, amin'ny alàlan'ny fandefasana fangarony avo lenta sy fandrefesana avo lenta cont ...
Vao tsy ela akory izay, tao amin'ny toeram-panorenana iray tany Shanghai, dia nahavita ny faneken'ny mpanjifa ny zavamaniry roa miorina roa Shantui Janeoo HZS180-3R, nanomboka ny diany vaovao tamin'ny fanamboarana ny lalamby Shanghai-Suhu tamin'ny alàlan'ny fampifangaroana avo lenta sy fandrefesana avo lenta. hampiroborobo ny famoronana ...
Shantui Janeoo dia manampy amin'ny fananganana tetezana fiaran-dalamby haingam-pandeha haingam-pandeha voalohany indrindra - ny tetezan'i Yangtze River eo ambonin'ny Wufeng Shan.
Tamin'ny 11 Desambra, niditra haingana tao amin'ny Tetezan'i Yangtze any Wufengshan, ny metaly Fuxing, 64 metatra miala ny renirano, manamarika ny fahavitan'ny tetezana fampiatoana haingam-pandeha haingam-pandeha voalohany manerantany. Tamin'ny dingana voalohany, nandritra ny fananganana ny tetikasa, roa ...
Shantui Janeoo dia manampy amin'ny fananganana ilay tetezana fampiatoana haingam-pandeha haingam-pandeha voalohany indrindra - Bridge Bridge Wufengshan Yangtze
Tamin'ny 11 Desambra, ny fiaran-dalamby Fuxing dia nandeha haingana nankany amin'ny Tetezan'i Wufengshan Yangtze 64 metatra miala ny moron'ny renirano, manamarika ny fahavitan'ny tetezana fampiatoana voalohany an'izao tontolo izao ho an'ny lalamby haingam-pandeha. Amin'ny dingana voalohany, andiany roa an'ny SjHZS180-3R zana-kazo mampifangaro ny Sh ...
Ny fitaovana Shantui Janeoo dia manampy amin'ny fanamboarana lalamby haingam-pandeha Hangzhou-Wenzhou
Nandritra ny vanim-potoana fanamboarana dia nifehy fatratra ny kalitaon'ny fametrahana ireo mpiasa, nanadino ny antsipirian'ny fananganana, naharesy ny zava-tsarotra, nanome toky fa natolotra ara-potoana ny fitaovana rehetra, ary nanolotra valiny mahafa-po ho an'ny mpanjifa, manao «custo ...
Manampy amin'ny fanamboarana lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha ny fitaovana Shantui Janeoo
Vao tsy ela akory izay, zavamaniry roa mifangaro amin'ny beton SjHZS120-3R ao amin'ny toeram-pananganana Zhanjiang ao Shantui Janeoo no nahavita ny fametrahana sy ny fanirahana azy, ary natolotra tamim-pahombiazana tamin'ny mpanjifa izy ireo amin'ny fanamboarana lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha. Nifanindry tamin'ny fe-potoana ...
Ny tetik'asa fanavaozana ny fitaovana fampifangaroana ranomasina an-dranomasina Shantui Janeoo dia saika hanampy amin'ny fanamboarana ny tetezana ampitan-dranomasina Macau
Vao tsy ela akory izay, Shantui Janeoo dia nandresy tamim-pahombiazana ny tolotra ho an'ny tetikasa fanavaozana ny beton-dranomasina roa, ary tsy ho ela dia hanampy ny mpanjifa handray anjara amin'ny fampifangaroana ny tetezana miampita ranomasina fahaefatra an'i Macau. Amin'ny dingana voalohany, raha te-hihaona amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ...
Shantui Janeoo SjHS100-1 Laboratory Mixing Intelligent Laboratory dia nahazo ny loka BICES 2019 Technology Innovation Platinum Award
Vao tsy ela akory izay, nahazo loka i Shantui Janeoo avy amin'ny komity mpikarakara ny milina fananganana iraisam-pirenena China (Beijing), ny milina fananganana fitaovana ary ny fampirantiana ny milina fampiroboroboana ary ny fifanakalozana teknolojia. Ny toby fampifangaroana laboratoara SjHS100-1 tsy miankina ...